बेरोजगार युवाका लागि स्थानीय सरकारको क्यारमबोर्ड उपहार ! [एक लाख भन्दा धेरैं विनियोजन] « Janaboli
बेरोजगार युवाका लागि स्थानीय सरकारको क्यारमबोर्ड उपहार ! [एक लाख भन्दा धेरैं विनियोजन]
बाँके । नेपालमा बेरोजगारी समस्या कत्ति छ त्यसको बारेमा सायदैं भनिरहनु पर्दैन । आज हामी त्यही विषयमा जोडिएर कुरा गर्दैछौं कुनैं पनि नेताले त्यस देशमा भएको बेरोजगारीलाई निर्मुल अर्थात कम गर्न के सम्म गर्न सक्ला ? भौंतिक निर्माण लगायतका पर्यटनका क्षेत्रहरुमा विकास गर्छ । उसको देश वा समाजसुहाउदो वातावरण निर्माण गर्छ जसले समाजिक रुपमा सबैंलाई लाभ लिन सहज हुनछ । यस्तैं नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका वडा नम्बर ११ ले बेरोजगार युवाहरुका लागि क्यारमबोर्ड खरिद गरी वितरण गरेको छ ।
क्यारमबोर्ड खरिदका लागि एकलाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको जानकारी दिँदै वडा अध्यक्ष उज्जवलसिंह राठौंरले अहिलेसम्म चारवटा टोलमा क्यारमबोर्ड वितरण गरिएको बताउनुभयो । नाम नबताउने शर्तमा एकजना वडासदस्यले युवाहरुलाई खुशी बनाउन क्यारेमबोर्ड बाँडेको बताएका छन । सामाजिक रुपमा उच्च तहमा बसेका व्यक्तिहरुको यस्तो सोचले नेपाली समाज कहाँ जाने हो त्यस बारेमा हामी सबैं जनताहरुले समयमा नैं सोच्नुपर्ने समय आएका एक स्थानीयले जनाएका छन ।
क्यारमबोर्ड खेलमा ठूलो जुवा समेत हुने गरेको भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणको प्रयास गर्दै आएको छ । वडाको बजेटबाट नयाँ क्यारमबोर्ड पाएपछि क्यारम खेल्ने युवाहरु खुशी भए पनि अधिकांशले सरकारी बजेटको दुरुपयोग भएका दाबी गरेका छन् । अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले वडाको बजेटबाट क्यारमबोर्ड खरिद गरी वितरण गर्नु स्थानीय सरकारकै लागि गलत ट्रेन्ड हुने बताए ।